Fanaraha-maso ny kalitao vokatra, fanekena ny fangatahan'ny governemanta - GIS
Hijery ny antsipirihany →
Ny Cans, vokatra Aquatic, Fangaro sy ny hafa.
Orinasa elektrika sy trano elektronika, vokatra an-peo sy horonan-tsarimihetsika, Fitaovana solosaina, jiro ary jiro, singa, Telephony.
Ny akora akora simika sy ny vokatra simika, ny simika sy ny additives, Fertilizer sy ny zezika famatsiana, vokatra simika trano.
Akanjo, lambam-pandriana, lamba vita amin'ny trano, lamba, kitapo ary valizy, entana malefaka hafa.
Fitaovana elektromikaika ， Fitaovana masinina parts Auto faritra ， Pump ， Momba ， Machining singa ， Die casting ， Fonosana.
Fanamboarana entana, vokatra vita amin'ny tokantrano, fanaka, Vokatra sy ny trano fanamboarana trano, kilalao, Fanatanjahantena, vokatra seramika, vokatra vato.
Serivisy tsara indrindra ho anao
GIS (General Inspection Service Co., Ltd.) dia orinasa injeniera momba ny kalitao matihanina sy ny serivisy momba ny fitantanana. Nanolo-tena ny hanampy ny mpanjifa hanorina sy hanatsara ny fiantohana kalitao sy ny fanaraha-maso kalitao izy ireo, ary hanampy ny mpanjifa hamolavola sy hanara-maso ny mpamatsy azy ireo. Hatramin'ny 2005, GIS nahazo ny fitantanana ny kalitaon'ny fitantanana ankapobeny momba ny fanaraha-maso ny kalitao…
Fanamarihana momba ny fampiroboroboana ny serivisy kalitao
Manavotra ny saka-dia-General Inspection Services Co., Ltd
Nisy ankizivavy iray tao GIS nahita saka nitaingina sakaiza, nanampy azy handro ary avy eo nalefa tany amin'ny hopitaly biby mba hotsaboina tsara sy ho sitrana. Ary farany, nanampy tamin'ny findainy izy noho ny saka tsy mahomby. Themeans, saka dia nahita fianakaviana mafana. RamatoaTitania, tena midera ny hatsaram-ponao izahay.
Fanombohana voalohany, Fandraisana ny fanaraha-maso, Fanaraha-maso feno amin'ny Internet, fanaraha-maso amin'ny , Famakafakana trano, Amin'ny fizahana fizahana,